Usobishini umsakazi osolwa ngokuphinda ingoma kaMkokstad nekaBetusile
UMISIWE kuMhlobo Wenene, uNomonde Vakalisa, ngezinsolo zokuphinda izingoma zabaculi ababodwa Isithombe:FACEBOOK
USOBISHINI umsakazi woMhlobo Wenene, uNomonde Vakalisa, njengoba iNhlangano yezokuSakaza kuleli (SABC) ithathe isinqumo sokummisa emsebenzini.
Ngokuthola kweSolezwe sekuphele isonto lesibili uNomonde engazwakali ohlelweni alwenza ngoLwezibili ebusuku olusihloko sithi Iqonga Levangeli. Okhulumela iSABC, uMmoni Seapolelo akuqinisekisile ukumiswa kuNomonde.
"ISABC ingakuqinisekisa ukuthi uNksz Nomonde Vakalisa akaxoshiwe kuMhlobo Wenene kodwa usamisiwe okwamanje esiteshini," kusho uMmoni. Ebuzwa ukuthi uzobuya nini uNomonde, uMmoni akachazanga kodwa uthe uzobuya ngokuhamba kwesikhathi.
Isolezwe like labhala ngophenyo olwenziwa yiSABC emuva kokuqubuka komsindo ngokudlalwa kuphindelelwa ingoma kaDumi Mkokstad nekaBetusile ngobusuku obubodwa kwiQonga Levangeli. Izingoma okuthiwa zadlalwa ngalolo suku ngekaDumi Mkokstad ethi Ziphozenkosi nekaBetusile esihloko sithi Itarhu Lakhu.
UMmoni wakuqinisekisile ukuthi kunophenyo oluqhubekayo kulo msakazo. "ISABC ingakuqinisekisa ukuthi lokho okhuluma ngakho kwenzekile. Inqubo yangaphakathi izolandela mayelana nalolu daba njengoba kunemigomo yethu yokusebenza ejwayelekile ephuliwe," kusho uMmoni.
Kwenzeka lokhu nje, uNomonde, obuye abe ngumDikhoni nomethuli wezinkulumo ezakhayo, wake wasolwa ngokufuna ukugwazisa omunye umculi wokholo uYangama Mrwetyana wodumo lwengoma ethi Kuzohlatyelelwa kodwa leNhlangano yezokuSakaza yamkhipha phambili ngenxa yokuthi yathola ukuthi uNomonde ubebhecwa ngobende ekubeni inyama engayithanga mbibi.
Kwabuye kwaqhamuka nabanye abefundisi base-Estern Cape babiza uYangama ngohubhu lukabhejane.